IsiPheresiya 2019 October 23 3:13:48 Umbiko we-Bug Xhumana nathi Ama-Editions
Kulesi sigaba sewebhu, sizoletha esinye isizukulwane sezinsizakalo ze-intanethi namasevisi. Izinsizakalo ezivame ukusetshenziswa kakhulu, okuthiwa yiWeb Services, namuhla ziyingxenye eyaziwa futhi ebalulekile ye-Intanethi. Abasebenzisi abakhulu bezinsizakalo zewebhu, abaphathi bewebhusayithi kanye nabaphathi bewebhu ngoba izinsizakalo zeWeb zisebenza njengabaxhumanisi nabahlinzeki bezinsiza noma amaphakethe elwazi lokukhiqiza iwebhusayithi kwesinye isayithi, futhi umsebenzi wesistimu wamanje ulandela umthetho ofanayo.
Ukusekela : 88 64 42 28
Umgomo wabaqondisi bewebhu kanye nezinhlelo ze-inthanethi ukuhlinzeka ngamazinga wegolide, izinhlamvu zemali, njll njll, ukuheha izethameli eziningi, futhi kusobala ukuthi ummangalelwa ufuna inkomba yokulawula amanani afanele neqondile. Kumasevisi wewebhu okukhulunywe ngenhla, lesi yisiqinisekiso sokuthi lesi siqiniseko sizosekelwa yiqembu lethu lokulawula nokuqapha. Kulesi sigaba, ngaphezu kwenqubo yokulawulwa kwamanani, ngaphakathi kwesilinganiso sangaphakathi, zonke zihlolwe ngemithombo yangaphakathi evumelekile futhi ephumelelayo, nangaphakathi kokulinganisa kwangaphandle, kuzo zonke lezi zimo, irejista izolawulwa futhi iqondiswe umcimbi wephutha. Lolu hlelo lokuqapha lusetshenziswa ngezindlela ezimbili. Okokuqala, ngendlela ezenzakalelayo nehlelekile, futhi eyesibili, ngokuthembeka nobuqotho besistimu, ngumuntu osebenzayo osebenzayo.
Ukucabangela ukuthi amawebhusayithi angasebenzisa le nsizakalo akhuphukile, futhi avela ezinhlelweni nezici zezobuchwepheshe ngezilimi ezahlukene, izinhlaka ezahlukene, noma izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe, njll. Kwezinye izimo, akungabazeki ukuthi inhlanganisela yesevisi etholakele endaweni Ikhodi yewebhusayithi ayitholakali futhi ngezinye izikhathi idinga izinguquko noma ukuguqulwa kwethimba lethu lobuchwepheshe, ngenkathi seluleka futhi lihambisana newebhusayithi yokuya kuyo, uma kudingeka, ukuxazulula le nkinga noma ukuyiqinisa. Ukuguqulwa kuzodingeka ukuze isevisi embukisweni isetshenziswe kahle futhi iqondiswe kwiwebhusayithi yokuphela.
Isekela 24 x 7
Ngaphakathi, inqubo kanye nekhwalithi yokusekela ziphakathi kwezinkomba zokuhlola ezibaluleke kakhulu zesevisi yewebhu efunwa, futhi kunquma umehluko phakathi kwenkonzo yekhwalithi nokunye. Ekuhlinzekeni isevisi ngokwayo ehlobene nezimakethe zezezimali, ngisho nezimakethe zezimali ze-intanethi nokungaxhunyiwe ku-intanethi, nakuba kungabikho ukwakhiwa, ukusekelwa kubaluleke kakhulu. Ithimba lethu lokusekela, usebenzisa amathuluzi ahlukahlukene futhi silondoloze ukuqhubeka nokuqhubeka ekukhonzeni amakhasimende kanye nezicelo ezivela kulabo abathandayo, futhi ngaphezu kwazo zonke lezi zinketho, kuqinisekisa ukungaphazamiseki noma ukuphazamiseka kwesistimu, futhi uma kwenzeka ukuphazanyiswa noma iziphambeko ezingenzeka, izimpendulo zamakhasimende zizoqhubeka zixazulula ngokugcwele lolu daba futhi zinikeze ukwaneliseka kwamakhasimende kule nqubo.
Ukuze inqubo yokubambisana ibe lula, isevisi inikezwa ngesimo sovivinyo kanye nesikhathi esifushane, ngakho-ke phakathi nalesi sikhathi, iwebhusayithi yokuwamukela iyakwazi ukuhlola isevisi etholakele kwipulatifomu yayo yobuchwepheshe, nokuntuleka kwayo noma Ukusebenzisana kwezobuchwepheshe Hlola. Kule nkambo, ithimba lethu lobuchwepheshe linikeza, ngaphezu kokunikeza isiqondiso, ukubambisana okudingekayo. Lesi yisikhathi sokuhlola seviki elilodwa, lapho amaphakheji ohlangothini lwabalayenti athunyelwa khona kumakhasimende ngokufana nalokho okwangempela.
Izindlela ezihlukahlukene zitholakala ekubaleni nasekutholeni izindleko zalolu hlobo lwenkonzo emhlabeni wonke, kodwa inani lezifundo zethu liye lasiholela ekuhlanganiseni inamba yalezi zindlela ngefomula ethi efanelekile, okulinganayo ngokulinganayo Indlela engcono kakhulu ukukala ukulinganisa amandla abezindaba nabanikazi bewebhu. Ngale ndlela, abamukeli bemisebenzi (amawebhusayithi) bahlukaniswe ngezigaba ezine ngokulingana nenani lezivakashi ezisesayithi lakho futhi izinga elihlukile lentengo libhekwa ngalinye. Eqinisweni, amawebhusayithi asebenzisa le sevisi ezethameli eziningi asetshenziswa. Bazokhokha intengo ephakeme.
api.moshtamel_bar : (Zonke amaphakheji zihlanganisa lezi zinto)
Igolide le-18 ne-carat engu-24
Imali entsha nedala
Imali yesigamu nesiqingatha
Uhlamvu / Gram
Izimakethe ezinkulu kanye nezimakethe zomhlaba wonke
Amafutha e-Brent namafutha okukhanya
Amawebusayithi amasha adalwe noma amawebusayithi angabuka ku-3,000 ukubukwa kwekhasi ngosuku.
Inyangazonke: 1.500.000 Rials
Ikota: I-4.100.000 Rials
Izinyanga eziyisithupha: Rial 7.600.000
Ngonyaka: Rials 1 $
Amawebhusayithi anokungenani ama-3,000 kuya kokubukwa kwekhasi elingu-10 000 ngosuku.
Inyangazonke: 2.500.000 Rials
Ikota: I-6.750.000 Rials
Izinyanga eziyisithupha: Rial 12.750.000
Amawebhusayithi okungenani ama-10 kuya ku-35,000 ukubukwa kwekhasi ngosuku.
Inyangazonke: 3.400.000 Rials
Ikota: I-9.150.000 Rials
Izinyanga eziyisithupha: Rial 17.300.000
B amasayithi anenani elilinganiselwa ku-35,000 ukuya ekubukeni kwekhasi elingama-500,000 ngosuku.
Inyangazonke: 7.000.000 Rials
Ikota: I-18.500.000 Rials
Izinyanga eziyisithupha: Rial 35.500.000
USD/JPY 108.5 (0.01%)
Gold 1,489.10 (0.09%)